Subu Shrestha – Live Nepal News
Home / Subu Shrestha
नेपाल सरकारले गरिबी असायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भनेर प्रचार प्रसारमा मात्र लाखौको बजेट खर्च गर्ने गर्दछ । तर बुटवल स्थीत लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा टिकट काट्ने पैसा जुटाउन नसक्दा अस्पतालको गेटमा नै एक गरीब वृद्धले ज्यान गुमाएका छन् । अस्पताल वरपरका स्थानियका अनुसार एक जना व्यक्ति ८ दिन देखि अस्पताल …
फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गर्योआ भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम देहसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ। यौनकर्मीहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। पूर्वका प्रमुख शहर र बजारमा सर्वत्र स्थापना भइरहेका छन्, सेक्स स्टेसनहरू। यस्ता स्टेसनका पारखी …
यदि तपाईंको छाला स्वस्थ देखिन्छ भने तपाईंले आफ्नो उमेरलाई निकै सजलोसँग लुकाउन सक्नुहुन्छ । तर तपाईंको छालाबाट चमक गायब हुन्छ भने तपाईं चाँडै नै बुढि देखिन सुरु गर्नुहुन्छ । त्यसकारण तपाईंले आफ्नो छालामा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बजारमा पाइने क्रिमले अनुहारको चमक फिर्ता आउने सोच्नु भएको छ भने तपाईं …
विदेश जाने ‘गधा’हरु नेपाल फर्क म राेजगार दिलाउँछु – मुकुन्दे
‘पहाडमा रेलैरेल । मधेसमा खेतैखेत । ट्याक्टरले खेत जोत्ने । हेलिकप्टरले बीउ छर्ने । १० करोडसम्म जनतालाई सुखले पाल्ने । र, ३६५ दिन नै दसैं घोषणा गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम छ ।’ यो कुनै ठूलो राजनेताको भाषण होइन । केही वर्षअघिसम्म रत्नपार्कका रुखमाथि चढेर भाषण गरी चर्चामा कमाएका मुकुन्दे अर्थात् मुकुन्द …
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। …
झापा,बिर्तामोड स्थाइ निवासी हाल कर्मथलो हङकङमा लामो समयदेखी बस्दै आउनु भएका प्रेमराज लिम्बू मादेनको आफ्नै निवास मङककमा धारिलो हतियारबाट साङघातिक आक्रमणमा गर्दा बुबाको ज्यान गएको छ। घटना कसरी ? आइतबार अपरान्ह ३ :०० बजे तिर प्रेमराज लिम्बूको निवासमा नातेदार आउँदा बाबु छोरा बिच निकै ठुलो विवाद भैरहेको र नातेदारले जेठा छोरा मचिन्द्र …
काठमाडौंमा चिनियाँ रेल पहिला कि भारतीय ?
चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाउँदै यसको स्थलगत अध्ययन गरेको ५ महिना बित्यो । योसँगै हालैमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच भारतको सहयोगमा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । दुवै देशले अहिले काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा चासो बढाएका छन् । र, यसमा लगानी …
कन्सर्ट मा बुद्ध लामाले आफ्नो पहिलो गित गाएपछी ( भिडिओ हेर्नुहोस)
बुद्ध लामा अहिले अप्रिलभरी युरोप टुरका लागि ब्येस्त छन । अहिले उनी सहित नेपाल आइडल का टप ३ विजेता युरोपमा ब्येस्त छन । हालचालै बुद्ध लामाले एक गित निकालेका थिए तिम्रो साथ भएपछी यो गितले युट्युबमा सर्भाधिक सफल्ता पायो । यो गित बुद्धको पहिलो गित थियो र पहिलो चोटिमै बुद्ध …
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। छोटो समयमा पुरुषार्थी काम सम्पादन हुनेछ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ। समुदायको हितमा लोकप्रिय काम गर्न सकिनेछ। नोकरी र व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा …